तीस रुपैयाँमै एक प्लेट मःम (भिडियोसहित) - TV Annapurna
December 5, 2018 December 6, 2018 Annapurna TV
तुल्सी अर्याल ।
खाजाको रुपमा घेरैले मःम खोज्छन् । काठमाडौंका सडक पेटी, गल्ली, होटेल र रेस्टुरा मःम नपाइने ठाउँ प्राय होलान् । भोक लाग्दा, साथीभाई भेट्दा, ग्रल फेन्डसँग समय कटाउन पनि प्रायले खान्छन् । फरक फरक स्वादमा मःम पाइन्छ । मःम को मुल्यमा पनि एकरुपता छैन । साकाहारीले भेज, मांसाहारीले बफ र चिकेन मःम खोज्छन् । सडक पेटीमा साठी देखि सयमा पाइने मःम होटेल र रेस्टुरामा पुग्दा सय देखि तीन सय रुपैयाँसम्म पुग्छ । काठमाडौंमै यस्तो ठाउँ पनि छ जहा ३० रुपैयाँमै मःम पाउँछ । सुन्दा पत्याउन गाह्रो लाग्ने यो ठाउँ काठमाडौंको बसन्तपुरमा छ । महँगीले आकास छोइरहेका बेला यो कसरी सम्भव भयो ? काठमाडौंमै ३० वर्षदेखि मःम बेच्दै आएका बाबुलाल भन्छन्, मैले तीन रुपैयाँमा मःम बेच्न सुरु गरेको हुँ । तीन रुपैयाँमा मःम बेच्न सुरु गरेका बाबुलाले हाल प्लेटको तीस पुर्याएका छन् । दिउँसो दुई देखि साँझ ७ बजेसम्म उनलाई भ्याइनभ्याई हुन्छ ।
उमेरले तीन बीस कटेका बाबुलालले बफ अर्थात भैसीको मासुबाट बनेको मःम बेच्दै आएका छन् । तीस रुपैयाँमै मःम बेचेर उनले कसरी आम्दानी गर्छन त ? उनी भन्छन्, यसैबाट मैले सटरभाडा तिर्छु । काठमाडौंमा परिवार पाल्न र बुढेसकालमा औषधोपचार गर्न पनि पुगेकै छ । तीस रुपैयामा पाइने मःम गुणस्तरहिन होलानी त भन्ने प्रश्नको उनले हास्दै जवाफ दिए । मेरोमा मःम खान आउने ग्राहक प्राय नियमित छन् । एकै जनाले एकै दिन १२ प्लेटसम्म खाएको रेकर्ड छ । दिनभर भिँड लाग्छ । कस्तो मःम बन्छ मलाई भन्दा ग्राहकलाई नै सोध्नोस् ।
परिवारसहित मःम खान आएका रबिन भने बाबुलालले बनाउने मःम को प्रशंसा गर्दै थिए । उनले खुसी व्यक्त गर्दै भने, अन्त जादा एक प्लेटको सय डेढ सय तिर्नु पर्छ । यता आउदा त्यही पैसाले परिवारका सबैको भोक मेटिन्छ । उनी मात्रै होइन मःम अर्डर गरेर बसेकी एक युवती भन्दै थिइन्, बाजेको मःम ले मोहनी नै लायो नी । यो बाटो आउँदा जाँदा मःम नखाई जानै मन लाउदैन । बाबुलाल सपरिवार यो व्यवसायमा लागेका छन् । उनका एक छोरा र छोरीले यही व्यवसायमा सघाउछन् । बाबुलालका छोरा भन्छन्, यता ठाउँ अली सानो छ । सबै समान घरमै तयार गर्छौ । यता ल्याएर बेच्छौं । व्यवसायबाट सन्तुष्ट नै रहेको उनले सुनाए । उनले अगाडि थपे, जुनसुकै काम फाइदाका लागि मात्रै गर्ने होइन । व्यवसायमा पनि सेवा हुन्छ र सेवामा सन्तुष्टि मिल्छ । महँगी र बजारमा ठगी धन्दा चलिरहेको आरोप लागरिहेको बेला बाबुलालको यो व्यवसायबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ ।